Realme5Pro Review (Dare to Leap) | Myanmar Mobile App
Home Review/Unboxing Realme5Pro Review (Dare to Leap)
High End Smartphone ကိုင်နေတဲ့ကိုယ်တွေအဖို့ ဒီဖုန်းကို စမ်းခါစမှာ လိုအပ်ချက်၊ အားမရတာတွေ ဟိုတစ်ကွက်၊ ဒီတစ်ကွက်ရှိခဲ့ပေမယ့် သုံးတာတစ်ပတ်လောက် ကြာလာချိန်မှာတော့ Realme5Pro ဟာ ကိုယ်တိုင် Daily Driver အဖြစ်ဆက်သုံးဖို့ရော၊ တခြားလူတွေကို ညွှန်းဖို့ပါ ယုံကြည်ချက်ရှိစေတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဆိုတော့ ဘယ်လိုအားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေက ဒီဖုန်းကို ၃သိန်းခွဲဝန်းကျင်ဈေးမှာ ရွေးချယ်စရာ Mid-range ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်စေမလဲဆိုတာ Review နဲ့ ဖြေပေးသွားပါ့မယ်။
[Unicode]High End Smartphone ကိုငျနတေဲ့ကိုယျတှအေဖို့ ဒီဖုနျးကို စမျးခါစမှာ လိုအပျခကျြ၊ အားမရတာတှေ ဟိုတဈကှကျ၊ ဒီတဈကှကျရှိခဲ့ပမေယျ့ သုံးတာတဈပတျလောကျ ကွာလာခြိနျမှာတော့ Realme5Pro ဟာ ကိုယျတိုငျ Daily Driver အဖွဈဆကျသုံးဖို့ရော၊ တခွားလူတှကေို ညှနျးဖို့ပါ ယုံကွညျခကျြရှိစတေဲ့ ဖုနျးတဈလုံးဖွဈလာခဲ့တယျ။ ဆိုတော့ ဘယျလိုအားသာခကျြ၊ အားနညျးခကျြတှကေ ဒီဖုနျးကို ၃သိနျးခှဲဝနျးကငျြဈေးမှာ ရှေးခယျြစရာ Mid-range ဖုနျးတဈလုံးဖွဈစမေလဲဆိုတာ Review နဲ့ ဖွပေေးသှားပါ့မယျ။
ဗူးထဲမှာ ဖုန်းအပြင် Silicon Cover, စာရွက်တစ်ချို့၊ Sim Card ထုတ်မယ့် Pin, အားသွင်းကြိုး နဲ့ Adaptor ပါမယ်။ သတိထားမိတာက အားသွင်းကြိုးရဲ့ ထိပ်နှစ်ဖက်က Metal နေရာလေးတွေကို ဖုန်မပေ၊ မထိခိုက်အောင် Rubber စွပ်လေးတွေ စွပ်ပေးထားတာပါ။ (Oppo ဖုန်းတွေမှာလည်း ထိုနည်းတူပဲထင်ရဲ့) ကျန်တာအထူးအဆန်းမရှိပေမယ့် အဲဒီလို အသေးစိတ်ဂရုစိုက်ပေးတာလေးတော့ First Impression အနေနဲ့ သဘောကျမိတယ်။
[Unicode] ဗူးထဲမှာ ဖုနျးအပွငျ Silicon Cover, စာရှကျတဈခြို့၊ Sim Card ထုတျမယျ့ Pin, အားသှငျးကွိုး နဲ့ Adaptor ပါမယျ။ သတိထားမိတာက အားသှငျးကွိုးရဲ့ ထိပျနှဈဖကျက Metal နရောလေးတှကေို ဖုနျမပေ၊ မထိခိုကျအောငျ Rubber စှပျလေးတှေ စှပျပေးထားတာပါ။ (Oppo ဖုနျးတှမှောလညျး ထိုနညျးတူပဲထငျရဲ့) ကနျြတာအထူးအဆနျးမရှိပမေယျ့ အဲဒီလို အသေးစိတျဂရုစိုကျပေးတာလေးတော့ First Impression အနနေဲ့ သဘောကမြိတယျ။
-Aesthetic look & feel
ဖုန်းရဲ့ General Design Concept ကတော့ 2019 မှာ မြင်နေရတဲ့ Typical Android Phone တွေအတိုင်း Camera တွေက ဘယ်အပေါ်ထောင့်၊ Volume Key နဲ့ Sim Slot က ဖုန်းဘယ်ဘက်၊ Power Key က ဖုန်းရဲ့ ညာဘက်မှာပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းကိုမြင်ရုံနဲ့ Realme မှန်းသိသာစေတဲ့ အချက် ၃ချက်ကိုလည်း သတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။ ပထမတစ်ချက်ကတော့ ဖုန်းရဲ့ ဘယ်၊ အောက်ထောင့်က Realme Logo. ဒါကတော့ အဆန်းမဟုတ်။
[Unicode] ဖုနျးရဲ့ General Design Concept ကတော့ 2019 မှာ မွငျနရေတဲ့ Typical Android Phone တှအေတိုငျး Camera တှကေ ဘယျအပျေါထောငျ့၊ Volume Key နဲ့ Sim Slot က ဖုနျးဘယျဘကျ၊ Power Key က ဖုနျးရဲ့ ညာဘကျမှာပါမယျ။ ဒါပမေယျ့ ဖုနျးကိုမွငျရုံနဲ့ Realme မှနျးသိသာစတေဲ့ အခကျြ ၃ခကျြကိုလညျး သတိထားမိကွပါလိမျ့မယျ။ ပထမတဈခကျြကတော့ ဖုနျးရဲ့ ဘယျ၊ အောကျထောငျ့က Realme Logo. ဒါကတော့ အဆနျးမဟုတျ။
ဒုတိယတစ်ချက်က သူ့မှာသုံးထားတဲ့ Gradient Color ။ Realme 1 နဲ့2မှာ စသုံးခဲ့တဲ့ Crystal Design ကို Gradient Color ဖောက်ပြီး ပြန်သုံးထားတာက Realme5Pro ကို အမြင်အားဖြင့် Unique ဖြစ်စေတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ Review Unit ရထားတဲ့ Crystal Green မှာ ဘေးဘောင်ကိုပါ အပေါ်ဘက် အစိမ်းကနေ အောက်ဘက် အပြာကို တဖြည်းဖြည်းပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံ လုပ်ပေးထားတာလေးက Personally ချီးကျူးချင်တဲ့အချက်ပါ။ ထိပ်ဆုံး Camera ဘေးပတ်လည်က Yellow Ring လေးကိုတော့ တတိယအချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ချင်တယ်။
[Unicode] ဒုတိယတဈခကျြက သူ့မှာသုံးထားတဲ့ Gradient Color ။ Realme 1 နဲ့2မှာ စသုံးခဲ့တဲ့ Crystal Design ကို Gradient Color ဖောကျပွီး ပွနျသုံးထားတာက Realme5Pro ကို အမွငျအားဖွငျ့ Unique ဖွဈစတေယျလို့ ခံစားရတယျ။ Review Unit ရထားတဲ့ Crystal Green မှာ ဘေးဘောငျကိုပါ အပျေါဘကျ အစိမျးကနေ အောကျဘကျ အပွာကို တဖွညျးဖွညျးပွောငျးသှားတဲ့ပုံစံ လုပျပေးထားတာလေးက Personally ခြီးကြူးခငျြတဲ့အခကျြပါ။ ထိပျဆုံး Camera ဘေးပတျလညျက Yellow Ring လေးကိုတော့ တတိယအခကျြအဖွဈ သတျမှတျခငျြတယျ။
ဒီဖုန်းလက်ထဲစရောက်ချိန်မှာ ပလပ်စတစ်ဆန်တဲ့ ပွယောင်းယောင်း Feeling ကို စရတယ်။ (Plastic Body ဆိုတော့လည်း….) သူ့ရဲ့ဘေးဘောင်တွေကပါ ပလပ်စတစ်ဖြစ်နေတာက တခြား Mid-range Phone တစ်ချို့နဲ့ယှဉ်ရင် ဒီဖုန်းကို နဲနဲ Cheap ဖြစ်တယ်လို့ ခံစားရစေတယ်။ Cover တပ်မကိုင်ရင် အပွန်းအစင်းနဲနဲများနိုင်ပေမယ့် ကိုင်ရတာ မလေး၊မပေါ့ အနေတော်လေးဖြစ်နေတာ၊ ခလုတ်လေးတွေ တင်းတင်းရင်းရင်းလေးရှိတာ၊ အရောင်လေးလှနေတာ အဲဒီအချက်တွေကလည်း Cover တပ်ကိုင်ချင်စိတ်ကို ဒွိဟဖြစ်စေပြန်ရော။ ဆိုတော့ အစိမ်းကြိုက်တတ်တဲ့ကိုယ်တွေအတွက် Body လေး Plastic ဖြစ်တာတစ်ခုကလွဲရင် Realme5Pro ရဲ့ ဒီဇိုင်းကာလာအနေအထားကို ငြင်းဆန်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။
[Unicode] ဒီဖုနျးလကျထဲစရောကျခြိနျမှာ ပလပျစတဈဆနျတဲ့ ပှယောငျးယောငျး Feeling ကို စရတယျ။ (Plastic Body ဆိုတော့လညျး….) သူ့ရဲ့ဘေးဘောငျတှကေပါ ပလပျစတဈဖွဈနတောက တခွား Mid-range Phone တဈခြို့နဲ့ယှဉျရငျ ဒီဖုနျးကို နဲနဲ Cheap ဖွဈတယျလို့ ခံစားရစတေယျ။ Cover တပျမကိုငျရငျ အပှနျးအစငျးနဲနဲမြားနိုငျပမေယျ့ ကိုငျရတာ မလေး၊မပေါ့ အနတေျောလေးဖွဈနတော၊ ခလုတျလေးတှေ တငျးတငျးရငျးရငျးလေးရှိတာ၊ အရောငျလေးလှနတော အဲဒီအခကျြတှကေလညျး Cover တပျကိုငျခငျြစိတျကို ဒှိဟဖွဈစပွေနျရော။ ဆိုတော့ အစိမျးကွိုကျတတျတဲ့ကိုယျတှအေတှကျ Body လေး Plastic ဖွဈတာတဈခုကလှဲရငျ Realme5Pro ရဲ့ ဒီဇိုငျးကာလာအနအေထားကို ငွငျးဆနျစရာအကွောငျးမရှိပါဘူး။
“ရောက်ရောက်ချင်း ဆောက်နဲ့ထွင်း” သလိုဖြစ်နေပေမယ့် Camera ဦးစားပေးဖို့ Mid-range မှာ Realme5Pro ကို ရွေးရဲလားလို့ ခုနေလာမေးရင် ချက်ချင်းခေါင်းညိတ်မိမှာပါ။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ Nightscape Mode ကို Xiaomi ရဲ့ Mi9နဲ့ယှဉ်ပြီး ရခဲ့တဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ဆို ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ Zoom ဆွဲကြည့်ရင် Processing များလို့ ဆီဆေးပန်းချီနဲနဲဆန်တာကလွဲရင် သူ့ရဲ့ Noise ပိုငြိမ်၊ Sharpness ပိုကောင်းတဲ့ Night Photo တွေက Mi9ကိုတောင် သိမ်ငယ်စေတယ်။ Normal Mode နဲ့ရိုက်တဲ့ Low Light Photo တွေကလည်း Mid-range Smartphone camera ထက်ပိုတဲ့ Quality ကို ခံစားမိတယ်။ Ultra-wide camera မှာလည်း Nightscape Mode ပါပြီး ပုံထွက်က ရွက်ကြမ်းရေကျိုဆိုပေမယ့် မပါတာထက်တော့ သာပါတယ်လေ။
[Unicode] “ရောကျရောကျခငျြး ဆောကျနဲ့ထှငျး” သလိုဖွဈနပေမေယျ့ Camera ဦးစားပေးဖို့ Mid-range မှာ Realme5Pro ကို ရှေးရဲလားလို့ ခုနလောမေးရငျ ခကျြခငျြးခေါငျးညိတျမိမှာပါ။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ Nightscape Mode ကို Xiaomi ရဲ့ Mi9နဲ့ယှဉျပွီး ရခဲ့တဲ့ယုံကွညျမှုကွောငျ့ဆို ပိုမှနျပါလိမျ့မယျ။ Zoom ဆှဲကွညျ့ရငျ Processing မြားလို့ ဆီဆေးပနျးခြီနဲနဲဆနျတာကလှဲရငျ သူ့ရဲ့ Noise ပိုငွိမျ၊ Sharpness ပိုကောငျးတဲ့ Night Photo တှကေ Mi9ကိုတောငျ သိမျငယျစတေယျ။ Normal Mode နဲ့ရိုကျတဲ့ Low Light Photo တှကေလညျး Mid-range Smartphone camera ထကျပိုတဲ့ Quality ကို ခံစားမိတယျ။ Ultra-wide camera မှာလညျး Nightscape Mode ပါပွီး ပုံထှကျက ရှကျကွမျးရကြေိုဆိုပမေယျ့ မပါတာထကျတော့ သာပါတယျလေ။
Sony Sensor ကို သုံးထားတဲ့ 48MP Main camera က ညတင်မကပဲ နေ့မှာပါ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တာတွေ့ရတယ်။ Color တွေက Cool ဖြစ်တဲ့ဘက်ရောက်ပေမယ့် Natural ဆန်တယ်။ Zoom ဆွဲရင်တော့ အရိပ်ကျတဲ့နေရာတွေမှာ Noise နဲနဲတွေ့ရပေမယ့် ပုံမှန်အနေအထားမှာ ပုံတွေရဲ့ Detail နဲ့ Dynamic Range ကို အတော်အားရမိပါတယ်။
[Unicode] Sony Sensor ကို သုံးထားတဲ့ 48MP Main camera က ညတငျမကပဲ နမှေ့ာပါ ကောငျးကောငျးအလုပျလုပျတာတှရေ့တယျ။ Color တှကေ Cool ဖွဈတဲ့ဘကျရောကျပမေယျ့ Natural ဆနျတယျ။ Zoom ဆှဲရငျတော့ အရိပျကတြဲ့နရောတှမှော Noise နဲနဲတှရေ့ပမေယျ့ ပုံမှနျအနအေထားမှာ ပုံတှရေဲ့ Detail နဲ့ Dynamic Range ကို အတျောအားရမိပါတယျ။
119 Degree ရှိတဲ့ 8MP Ultra-wide camera က နေ့ဘက်မှာတော့ ကောင်းကောင်းကြီးကို အလုပ်လုပ်တယ်။ Main Camera လောက် Detail မကောင်းတာကလွဲရင် မြင်ကွင်းကျယ်တယ်၊ Disrtortion နဲတယ်၊ Color တွေအဆင်ပြေတယ်။ ခရီးအထွက်များ၊ မြင်ကွင်းကျယ်ပုံတွေ ရိုက်ချင်သူတွေအတွက် ကွက်တိပဲပေါ့ ။ 2MP Macro camera က 4cm ထိ အကောင်းဆုံးအနီးကပ်ရိုက်နိုင်ပေမယ့် ရလာတဲ့ Image Quality က Full HD level မို့ FB, IG တင်ရုံ Level လောက်ပဲ၊ ထူးတော့ ချီးကျူးစရာမရှိ။
[Unicode] 119 Degree ရှိတဲ့ 8MP Ultra-wide camera က နဘေ့ကျမှာတော့ ကောငျးကောငျးကွီးကို အလုပျလုပျတယျ။ Main Camera လောကျ Detail မကောငျးတာကလှဲရငျ မွငျကှငျးကယျြတယျ၊ Disrtortion နဲတယျ၊ Color တှအေဆငျပွတေယျ။ ခရီးအထှကျမြား၊ မွငျကှငျးကယျြပုံတှေ ရိုကျခငျြသူတှအေတှကျ ကှကျတိပဲပေါ့ ။ 2MP Macro camera က 4cm ထိ အကောငျးဆုံးအနီးကပျရိုကျနိုငျပမေယျ့ ရလာတဲ့ Image Quality က Full HD level မို့ FB, IG တငျရုံ Level လောကျပဲ၊ ထူးတော့ ခြီးကြူးစရာမရှိ။
Selfie မှာ Oppo Family လို့ ပြောစရာမလိုလောက်အောင် 16MP camera ကိုပဲ ရိုးရာမပျက်သုံးထားတယ်။ ပုံတွေက ဘာ Effect မှမထည့်တောင် Processing များပြီး အရမ်း Sharp ဖြစ်တယ်ခံစားမိ။ HDR ပါလို့ နောက်ခံပုံရိပ်တွေကို ဖြူဖွေးမသွားအောင် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ထိန်းပေးနိုင်တယ်။ Low Light မှာတော့ Sharpness များတာလက်ခံနိုင်ရင် Quality မဆိုးဘူးပြောလို့ရတယ်။ Selfie Portrait က အနားသတ်နဲ့ နောက်ခံဝါးတာလေးတွေ တိကျတယ်ဆိုနိုင်တဲ့အနေအထား။
[Unicode] Selfie မှာ Oppo Family လို့ ပွောစရာမလိုလောကျအောငျ 16MP camera ကိုပဲ ရိုးရာမပကျြသုံးထားတယျ။ ပုံတှကေ ဘာ Effect မှမထညျ့တောငျ Processing မြားပွီး အရမျး Sharp ဖွဈတယျခံစားမိ။ HDR ပါလို့ နောကျခံပုံရိပျတှကေို ဖွူဖှေးမသှားအောငျ အတိုငျးအတာတဈခုထိ ထိနျးပေးနိုငျတယျ။ Low Light မှာတော့ Sharpness မြားတာလကျခံနိုငျရငျ Quality မဆိုးဘူးပွောလို့ရတယျ။ Selfie Portrait က အနားသတျနဲ့ နောကျခံဝါးတာလေးတှေ တိကတြယျဆိုနိုငျတဲ့အနအေထား။
Portrait ဆိုမှ သူ့ရဲ့ Main Camera Portrait Mode အတွက် 2MP Depth Sensor ပါပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လုပ်တိုင်း ရှေ့တိုးခိုင်းနေတာကလွဲရင် ကျန်တာ အဆင်ပြေပါတယ်။ Video ပိုင်းမှာ 4K ထိ အများဆုံးရိုက်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် EIS နဲ့ ခပ်ငြိမ်ငြိမ်ရိုက်နိုင်တာက 1080p, 30fps mode နဲ့မှပါ။ (ဒါတောင် လမ်းလျှောက်ရင် နဲနဲ Shake ဖြစ်သေး) 960fps Video ကတော့ ပါတယ်ဆိုတာကလွဲရင် Quality အားဖြင့် မစွံပါ။
[Unicode] Portrait ဆိုမှ သူ့ရဲ့ Main Camera Portrait Mode အတှကျ 2MP Depth Sensor ပါပွီး ဓာတျပုံရိုကျဖို့လုပျတိုငျး ရှတေို့းခိုငျးနတောကလှဲရငျ ကနျြတာ အဆငျပွပေါတယျ။ Video ပိုငျးမှာ 4K ထိ အမြားဆုံးရိုကျနိုငျတယျဆိုပမေယျ့ EIS နဲ့ ခပျငွိမျငွိမျရိုကျနိုငျတာက 1080p, 30fps mode နဲ့မှပါ။ (ဒါတောငျ လမျးလြှောကျရငျ နဲနဲ Shake ဖွဈသေး) 960fps Video ကတော့ ပါတယျဆိုတာကလှဲရငျ Quality အားဖွငျ့ မစှံပါ။
ဆိုတော့ Video ပိုင်းအားနည်းချက်နဲနဲကို လက်ခံနိုင်ရင် Camera အသားပေးရွေးချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို Realme5Pro မညွှန်းနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ Camera UI လေး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ သုံးရလွယ်တာရယ်၊ Expert Mode မှာ Shutter Speed ကို 16sec ထိ ရိုက်နိုင်တာရယ်ကတော့ ဒီဖုန်းရဲ့ Bonus Point တွေပေါ့။
[Unicode] ဆိုတော့ Video ပိုငျးအားနညျးခကျြနဲနဲကို လကျခံနိုငျရငျ Camera အသားပေးရှေးခငျြတဲ့သူတဈယောကျကို Realme5Pro မညှနျးနိုငျစရာ အကွောငျးမရှိပါဘူး။ Camera UI လေး ရှငျးရှငျးလငျးလငျးနဲ့ သုံးရလှယျတာရယျ၊ Expert Mode မှာ Shutter Speed ကို 16sec ထိ ရိုကျနိုငျတာရယျကတော့ ဒီဖုနျးရဲ့ Bonus Point တှပေေါ့။
-Performance & Battery
Snapdragon 712 ကို Mid-range SoC အနေနဲ့ ထွေထွေထူးထူးချီးကျူးစရာမရှိပေမယ့် သူ့ Performance ကို Realme က အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်တယ်ဆိုရမှာပဲ။ Flagship SoC နဲ့ယှဉ်ရင် Daily Usage မှာ သိသာပေမယ့် သုံးကြည့်သလောက်တော့ ထစ်တာ၊ ရပ်သွားတာမျိုးမရှိ။ PUBG ကို HD, High Setting မှာ ကောင်းကောင်း Handle လုပ်နိုင်တဲ့အပြင် ၁ နာရီလောက် ဂိမ်းဆော့အပြီးမှာတောင် ဖုန်းက နွေးရုံပဲနွေးတာ စိတ်ကျေနပ်စရာပါ။
[Unicode] Snapdragon 712 ကို Mid-range SoC အနနေဲ့ ထှထှေထေူးထူးခြီးကြူးစရာမရှိပမေယျ့ သူ့ Performance ကို Realme က အကောငျးဆုံးအသုံးခနြိုငျတယျဆိုရမှာပဲ။ Flagship SoC နဲ့ယှဉျရငျ Daily Usage မှာ သိသာပမေယျ့ သုံးကွညျ့သလောကျတော့ ထဈတာ၊ ရပျသှားတာမြိုးမရှိ။ PUBG ကို HD, High Setting မှာ ကောငျးကောငျး Handle လုပျနိုငျတဲ့အပွငျ ၁ နာရီလောကျ ဂိမျးဆော့အပွီးမှာတောငျ ဖုနျးက နှေးရုံပဲနှေးတာ စိတျကနြေပျစရာပါ။
Mid-range SoC တွေရဲ့အားသာချက်က ဖုန်းရဲ့ Battery Life လို့ ပြောရမလားပဲ။ PUBG ၁ နာရီကို 16% စွန်းစွန်း၊ HD Movie ၁ နာရီကို 6% ပဲကုန်တာက Heavy User မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အားတစ်ခါသွင်းကို ၂ရက်နီးနီး အေးဆေးသုံးလို့ရသလို Game ဆော့၊ Social Media အသုံးများမယ့်သူတွေအတွက်လည်း ၁ ရက်တာကို စိတ်အေးလက်အေးသုံးလို့ရမယ်လို့ ကိုယ်တွေတော့ထင်တယ်။ 20W Support တဲ့ VOOC3ကလည်း 4035 mAh ကို ၁ နာရီခွဲလောက်နဲ့ 0-100 အားပြည့်တယ်ဆိုတော့ မဆိုးလှဘူး။ ဆိုတော့ ဂိမ်းဆော့ဖို့ Realme5Pro ကို ရွေးမယ်ဆိုတောင် မမှားလောက်ဘူးလို့ ကိုယ်တွေတော့ ထင်တယ်။
[Unicode] Mid-range SoC တှရေဲ့အားသာခကျြက ဖုနျးရဲ့ Battery Life လို့ ပွောရမလားပဲ။ PUBG ၁ နာရီကို 16% စှနျးစှနျး၊ HD Movie ၁ နာရီကို 6% ပဲကုနျတာက Heavy User မဟုတျဘူးဆိုရငျ အားတဈခါသှငျးကို ၂ရကျနီးနီး အေးဆေးသုံးလို့ရသလို Game ဆော့၊ Social Media အသုံးမြားမယျ့သူတှအေတှကျလညျး ၁ ရကျတာကို စိတျအေးလကျအေးသုံးလို့ရမယျလို့ ကိုယျတှတေော့ထငျတယျ။ 20W Support တဲ့ VOOC3ကလညျး 4035 mAh ကို ၁ နာရီခှဲလောကျနဲ့ 0-100 အားပွညျ့တယျဆိုတော့ မဆိုးလှဘူး။ ဆိုတော့ ဂိမျးဆော့ဖို့ Realme5Pro ကို ရှေးမယျဆိုတောငျ မမှားလောကျဘူးလို့ ကိုယျတှတေော့ ထငျတယျ။
-Speaker & Audio
သူ့မှာပါတဲ့ Mono Speaker က အတော်လေး အသံကျယ်ပြီး စူးတယ်။ Music Video တွေမှာတော့ Bass အသံက Flat ဖြစ်ပေမယ့် တခြားအပိုင်းတွေမှာတော့ အဆင်ပြေတယ်။ Movie, Review Video တွေကို နားကြပ်မတပ်ပဲကြည့်ရင်တောင် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အဆင်ပြေမယ့် အနေအထားပါ။ Volume အဆုံးတင်ရင် နဲနဲ အသံအက်ချင်တာကလွဲရင်ပေါ့။
[Unicode] သူ့မှာပါတဲ့ Mono Speaker က အတျောလေး အသံကယျြပွီး စူးတယျ။ Music Video တှမှောတော့ Bass အသံက Flat ဖွဈပမေယျ့ တခွားအပိုငျးတှမှောတော့ အဆငျပွတေယျ။ Movie, Review Video တှကေို နားကွပျမတပျပဲကွညျ့ရငျတောငျ အတိုငျးအတာတဈခုထိ အဆငျပွမေယျ့ အနအေထားပါ။ Volume အဆုံးတငျရငျ နဲနဲ အသံအကျခငျြတာကလှဲရငျပေါ့။
နားကြပ်ပေါက်ပါတာကို Dongle သုံးရတာထက် ကိုယ်တွေတော့ ပိုသဘောကျတယ်။ သူ့ Music Player မှာပါတဲ့ Real Power Sound က Equilizer ချိန်ရတာလည်း ရိုးရှင်းလွယ်ကူတယ်။ ဒါပေမယ့် နားကြပ်ကထွက်တဲ့ Sound Quality ကတော့ Bass သံ ပြင်းပြင်းနဲ့ နားထောင်ရတာ ကြိုက်တတ်သူတွေအတွက် ပိုသင့်တော်မှာပါ။ Instrument တစ်သံချင်း အရသာခံနားထောင်တတ်တဲ့သူတွေတွက်တော့ Realme5Pro က သာမန်ထက်မပိုတဲ့ Sound Quality ပဲ ပြန်ရပါလိမ့်မယ်။
[Unicode] နားကွပျပေါကျပါတာကို Dongle သုံးရတာထကျ ကိုယျတှတေော့ ပိုသဘောကတြယျ။ သူ့ Music Player မှာပါတဲ့ Real Power Sound က Equilizer ခြိနျရတာလညျး ရိုးရှငျးလှယျကူတယျ။ ဒါပမေယျ့ နားကွပျကထှကျတဲ့ Sound Quality ကတော့ Bass သံ ပွငျးပွငျးနဲ့ နားထောငျရတာ ကွိုကျတတျသူတှအေတှကျ ပိုသငျ့တျောမှာပါ။ Instrument တဈသံခငျြး အရသာခံနားထောငျတတျတဲ့သူတှတှေကျတော့ Realme5Pro က သာမနျထကျမပိုတဲ့ Sound Quality ပဲ ပွနျရပါလိမျ့မယျ။
6.3”, Full HD+ သုံးထားပေမယ့် IPS LCD ဖြစ်နေတဲ့အချက်က Level တူ ပြိုင်ဘက်တွေကြားမှာတော့ Realme5Pro ကို မျက်နှာငယ်စေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီလိုထင်ခဲ့ပေမယ့် LCD Display တစ်ခုအနေနဲ့ အတော်ကောင်းပါလား ဆိုတဲ့ Feeling မျိုး ဒီဖုန်းသုံးရင်း ကိုယ်တွေတော့ ရခဲ့တယ်။ Color ပိုင်းအတော်ကောင်းလို့ Movie ကြည့်၊ Game ဆော့၊ နောက်ဆုံး Facebook ထိုင်ပွတ်နေချိန်မျိုးမှာတောင် Impression down တာမျိုး တစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရဘူး။ Brightness ကို တစ်ဝက်လောက်နီးနီး တင်သုံးရတဲ့တစ်ချက်ကလွဲလို့ပေါ့။ ဒါက Super AMOLED ကနေ Realme ရဲ့ LCD ပြောင်းသုံးကြည့်တဲ့ ကိုယ့် Experience ပါ။
[Unicode] 6.3”, Full HD+ သုံးထားပမေယျ့ IPS LCD ဖွဈနတေဲ့အခကျြက Level တူ ပွိုငျဘကျတှကွေားမှာတော့ Realme5Pro ကို မကျြနှာငယျစပေါလိမျ့မယျ။ ကိုယျတိုငျလညျး အဲဒီလိုထငျခဲ့ပမေယျ့ LCD Display တဈခုအနနေဲ့ အတျောကောငျးပါလား ဆိုတဲ့ Feeling မြိုး ဒီဖုနျးသုံးရငျး ကိုယျတှတေော့ ရခဲ့တယျ။ Color ပိုငျးအတျောကောငျးလို့ Movie ကွညျ့၊ Game ဆော့၊ နောကျဆုံး Facebook ထိုငျပှတျနခြေိနျမြိုးမှာတောငျ Impression down တာမြိုး တဈခါမှမကွုံခဲ့ရဘူး။ Brightness ကို တဈဝကျလောကျနီးနီး တငျသုံးရတဲ့တဈခကျြကလှဲလို့ပေါ့။ ဒါက Super AMOLED ကနေ Realme ရဲ့ LCD ပွောငျးသုံးကွညျ့တဲ့ ကိုယျ့ Experience ပါ။
Realme5Pro ပေါ်မှာ Latest Update တင်သုံးခဲ့တဲ့ Color OS6ကတော့ Error ရယ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်စရာမရှိလောက်အောင် Stable ဖြစ်သလို Global Version မို့ Google Service အပြင် Google App တွေပါ တစ်ခါတည်းပါလာတယ်။ Font အတွက်လည်း Zawgyi, Uni ကြိုက်ရာရွေးနိုင်တာက အတော်အဆင်ပြေတယ်။ Color OS5နဲ့ယှဉ်ရင် Feature အတော်စုံလာတဲ့ Color OS6မှာ သဘောအကျမိဆုံးက ဘေးဘောင်ကနေ ကိုယ်အသုံးများတဲ့ App တွေကို စိတ်ကြိုက်ရွေးပြီး အလွယ်တကူခေါ်သုံးနိုင်တဲ့ Smart Sidebar Feature လေးပေါ့။ Power Button ကို Google Assistance Button အဖြစ်သုံးနိုင်တာ၊ Oppo မှာ အစဉ်အဆက်သုံးလာတဲ့ Screen-off Gesture စတာတွေကလည်း သုံးတတ်သလို အသုံးတည့်တယ်။ ဒါပေမယ့် Color OS မှာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ UI ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တယ်ခံစားမိတဲ့ အချက်တစ်ချို့ကိုလည်း မြင်ခဲ့ရတယ်။
[Unicode] Realme5Pro ပျေါမှာ Latest Update တငျသုံးခဲ့တဲ့ Color OS6ကတော့ Error ရယျလို့ ခေါငျးစဉျတပျစရာမရှိလောကျအောငျ Stable ဖွဈသလို Global Version မို့ Google Service အပွငျ Google App တှပေါ တဈခါတညျးပါလာတယျ။ Font အတှကျလညျး Zawgyi, Uni ကွိုကျရာရှေးနိုငျတာက အတျောအဆငျပွတေယျ။ Color OS5နဲ့ယှဉျရငျ Feature အတျောစုံလာတဲ့ Color OS6မှာ သဘောအကမြိဆုံးက ဘေးဘောငျကနေ ကိုယျအသုံးမြားတဲ့ App တှကေို စိတျကွိုကျရှေးပွီး အလှယျတကူချေါသုံးနိုငျတဲ့ Smart Sidebar Feature လေးပေါ့။ Power Button ကို Google Assistance Button အဖွဈသုံးနိုငျတာ၊ Oppo မှာ အစဉျအဆကျသုံးလာတဲ့ Screen-off Gesture စတာတှကေလညျး သုံးတတျသလို အသုံးတညျ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ Color OS မှာ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ UI ဖွဈဖို့ လိုအပျတယျခံစားမိတဲ့ အခကျြတဈခြို့ကိုလညျး မွငျခဲ့ရတယျ။
SoC ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် Animation ပိုင်းက Smooth ဖြစ်အောင် လုပ်ယူထားပုံပေါ်ပြီး Folder, Apk အဝင်အထွက်တွေမှာ နှေးလိုက်၊ မြန်လိုက် တသမတ်ထဲမရှိတာက သဘောမကျတဲ့ပထမအချက်။ ဒုတိယအချက်က Navigation Gesture တွေ။ အထူးသဖြင့် Video ဝင်ကြည့်၊ ဂိမ်းဝင်ဆော့နေတုန်း ထွက်ဖို့ကြိုးစားရင် တစ်ခါတစ်လေ Gesture တွေ ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်သလို User Friendly မဖြစ်ဘူးခံစားရတယ်။ တတိယတစ်ချက်က Setting ပိုင်းအစီအရီ။ ဥပမာ တစ်နေရာထဲစုထားလို့ရတဲ့ Tab တွေ ကွဲထွက်နေတာ၊ Battery Saving Mode မှာတင် သံတူကျောင်းကွဲ Tab တွေပွထနေတာ။ အဲလို ကိစ္စသေးသေးလေးတွေက UI တစ်ခုကို ထဲထဲဝင်ဝင်သုံးလာတဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ်တွေအတွက်တော့ စိတ်ရှုပ်စရာလေးတွေ ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။
[Unicode] SoC ကွောငျ့လညျးဖွဈနိုငျပမေယျ့ Animation ပိုငျးက Smooth ဖွဈအောငျ လုပျယူထားပုံပျေါပွီး Folder, Apk အဝငျအထှကျတှမှော နှေးလိုကျ၊ မွနျလိုကျ တသမတျထဲမရှိတာက သဘောမကတြဲ့ပထမအခကျြ။ ဒုတိယအခကျြက Navigation Gesture တှေ။ အထူးသဖွငျ့ Video ဝငျကွညျ့၊ ဂိမျးဝငျဆော့နတေုနျး ထှကျဖို့ကွိုးစားရငျ တဈခါတဈလေ Gesture တှေ ကောငျးကောငျးအလုပျမလုပျသလို User Friendly မဖွဈဘူးခံစားရတယျ။ တတိယတဈခကျြက Setting ပိုငျးအစီအရီ။ ဥပမာ တဈနရောထဲစုထားလို့ရတဲ့ Tab တှေ ကှဲထှကျနတော၊ Battery Saving Mode မှာတငျ သံတူကြောငျးကှဲ Tab တှပှေထနတော။ အဲလို ကိစ်စသေးသေးလေးတှကေ UI တဈခုကို ထဲထဲဝငျဝငျသုံးလာတဲ့အခါမြိုးမှာ ကိုယျတှအေတှကျတော့ စိတျရှုပျစရာလေးတှေ ဖွဈလာတော့တာပါပဲ။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်အမြင်ပြောရရင်တော့ Color OS6က အငြိမ်သုံးချင်တဲ့သူတွေနဲ့ အနုအရွပုံစံလေးတွေသဘောကျတဲ့ သူ့ပရိတ်သတ်အတွက် အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့် Feature များများနဲ့ ကောင်းကောင်းသုံးချင်တဲ့သူအတွက်တော့ ဘာလိုလို့ လိုနေမှန်းမသိတာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
[Unicode] ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့အမွငျပွောရရငျတော့ Color OS6က အငွိမျသုံးခငျြတဲ့သူတှနေဲ့ အနုအရှပုံစံလေးတှသေဘောကတြဲ့ သူ့ပရိတျသတျအတှကျ အဆငျပွနေိုငျပမေယျ့ Feature မြားမြားနဲ့ ကောငျးကောငျးသုံးခငျြတဲ့သူအတှကျတော့ ဘာလိုလို့ လိုနမှေနျးမသိတာမြိုး ခံစားရနိုငျပါတယျ။
-LCD Display မို့ Fingerprint Scanner က နောက်မှာရှိမယ်။ Unlock Speed မြန်တာကိုတော့ သဘောကျတယ်။
-SD Card Slot သီးသန့်ပါတော့ Dual Sim+SD Card သုံးချင်သူတွေအဆင်ပြေမယ်။
2019 မှာ Basic ဖြစ်တဲ့ 64GB Version မှာ RAM 4GB ပဲပါတာကိုတော့ သဘောမကျ။ 128GB Version ကတော့ RAM 8 GB ပါမယ်။
-ဖုန်းကို Remote အဖြစ်သုံးနိုင်မယ့် IR Blaster ပါမလာတာကိုလည်း အားမလိုအားမရဖြစ်မိတယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ။
-LCD Display မို့ Fingerprint Scanner က နောကျမှာရှိမယျ။ Unlock Speed မွနျတာကိုတော့ သဘောကတြယျ။
-SD Card Slot သီးသနျ့ပါတော့ Dual Sim+SD Card သုံးခငျြသူတှအေဆငျပွမေယျ။
2019 မှာ Basic ဖွဈတဲ့ 64GB Version မှာ RAM 4GB ပဲပါတာကိုတော့ သဘောမကြ။ 128GB Version ကတော့ RAM 8 GB ပါမယျ။
-ဖုနျးကို Remote အဖွဈသုံးနိုငျမယျ့ IR Blaster ပါမလာတာကိုလညျး အားမလိုအားမရဖွဈမိတယျ။ ဒီလောကျပါပဲ။
အနှစ်ချုပ်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောကြတာပေါ့။ ၃ သိန်းခွဲဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ ဈေးမှာ ဒီဖုန်းထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ အများကခံစားမိမယ့် ပရိတ်သတ်ကြိုက် Mid-range ဖုန်းတစ်ချို့ရှိနေတာကတော့ ငြင်းမရတဲ့အချက်။ အဲဒီထဲမှာ အများစုကလည်း Mi နဲ့ Redmi Phone တွေ။ ဆိုတော့ Realme5Pro ကို ဘာအတွက်ကြောင့် Recommend ပေးနေသေးလဲ?
အဖြေကရှင်းပါတယ်။ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဈေးမှာ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပိုလာတာဟာ Fan တွေအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အချက်ပါ။ ဒီတော့ Xiaomi မကြိုက်တဲ့ Smartphone Fan တွေ၊ သူများနဲ့မတူ ကွဲပြားချင်သူတွေအတွက် ဒီဖုန်းလေးဟာ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တွေအတွက်တော့ Battery, Snapdragon 712, Good quality LCD, UI Stability စတဲ့အချက်တွေ၊ အထူးသဖြင့် Camera ပိုင်းက Realme5Pro မှာ သဘောအကျမိဆုံးအချက်တွေဖြစ်နေလို့ ဒီအချက်တွေကို အဓိကရှာဖွေနေတဲ့သူတွေအတွက် Realme5Pro ဟာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ အကြံပြုရင်း….
ဆိုတော့ အနှဈခြုပျကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပဲပွောကွတာပေါ့။ ၃ သိနျးခှဲဝနျးကငျြဆိုတဲ့ ဈေးမှာ ဒီဖုနျးထကျပိုကောငျးတယျလို့ အမြားကခံစားမိမယျ့ ပရိတျသတျကွိုကျ Mid-range ဖုနျးတဈခြို့ရှိနတောကတော့ ငွငျးမရတဲ့အခကျြ။ အဲဒီထဲမှာ အမြားစုကလညျး Mi နဲ့ Redmi Phone တှေ။ ဆိုတော့ Realme5Pro ကို ဘာအတှကျကွောငျ့ Recommend ပေးနသေေးလဲ?
အဖွကေရှငျးပါတယျ။ ကိုယျတတျနိုငျတဲ့ဈေးမှာ ရှေးခယျြစရာတဈခုပိုလာတာဟာ Fan တှအေတှကျအကြိုးရှိတဲ့အခကျြပါ။ ဒီတော့ Xiaomi မကွိုကျတဲ့ Smartphone Fan တှေ၊ သူမြားနဲ့မတူ ကှဲပွားခငျြသူတှအေတှကျ ဒီဖုနျးလေးဟာ စဉျးစားစရာဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ကိုယျတှအေတှကျတော့ Battery, Snapdragon 712, Good quality LCD, UI Stability စတဲ့အခကျြတှေ၊ အထူးသဖွငျ့ Camera ပိုငျးက Realme5Pro မှာ သဘောအကမြိဆုံးအခကျြတှဖွေဈနလေို့ ဒီအခကျြတှကေို အဓိကရှာဖှနေတေဲ့သူတှအေတှကျ Realme5Pro ဟာ ထညျ့သှငျးစဉျးစားသငျ့တဲ့ဖုနျးတဈလုံး ဖွဈလာနိုငျတယျလို့ အကွံပွုရငျး….
Htet Oo Naing (Myanmar Mobile App)
Previous articleနိုဝငျဘာသုံးရကျနမေ့တိုငျခငျ iPhone5ကို iOS 10.3.4 မတငျထားရငျ ဘာတှဖွေဈမလဲ
Next articleမကျြနှာပွငျကှေးခေါကျနိုငျသော ခေါကျဖုနျးအသဈကို အမွညျးခပြွလိုကျတဲ့ Samsung